Kooxda Daacish oo duuleedka degmada Qandala ka afduubtay dad shacab ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kooxda Daacish oo duuleedka degmada Qandala ka afduubtay dad shacab ah
Wararka naga soo gaaraya duuleedka degmada Qandala ee gobolka Bari ayaa sheegaya in kooxda ka tirsan ururka Daacish ee ku sugan halkaasi ay si qorsheysan u afduubteen dad shacab ah iyo ciidamo ka tirsan maamulka Puntland oo kusii jeeday magaalada Boosaaso.
Illaa 9 qof oo 5 ka mid ah ay ahaayeen ciidanka maamulka Puntland ayaa la sheegayaa in lagu afduubtay duuleedka Qandala, waxaana 4 qof kale ay ahaayeen dad shacab ah oo mid kamid ah uu yahay nin waayeel ah.
Guddoomiyaha degmada Qandala ee maamulka Puntland Shariif Maxamed Quurshe oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo sheegay in askarta Puntland ee la qafaashay aan la ogeyn halka lala aaday, isagoona tilmaamay in ciidamo gurmad ah haatan loo diray goobtii uu falku ka dhacay.
Kooxda afduubka geystay ayaa la sheegayaa in tiro ahaan ay gaarayeen qiyaastii 50 askari oo afka u duubnaa, iyadoona dhacdadaan ay noqoneyso midkii ugu horeeysay oo koox ka tirsan ururka Daacish islamarkaana ku sugan gudaha Soomaaliya ay dad ku afduubtaan deegaanada Puntland.
Dhinaca kale, warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in shantii ka tirsanayd ciidankii Puntland ee dadkaasi lala afduubtay ay ka baxsadeen gacanta kooxda Daacsih, iyagoona haatan gaaray degmada Qandala ee gobolka Bari.
Illaa iyo haatan waxaa weli nolol iyo geeri lagu la’yahay ilaa 4 qof oo ka mid ahaa dadkii gaariga lagala dagay islamarkaana uu ku jiray nin Oday ah.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaan noqonaysa middii ugu horeeysay oo koox Daacish ka tirsan kuna sugan gudaha Soomaaliya ay dad ku afduubtaan deegaanada Puntland.